Imbali kunye nezoshishino zokwenza i-Lump Charcoal
Imbali kunye nezoshishino zokwenza umlilo
I-charcoal iyininzi engapheliyo yekhabhoni kwaye inokwenziwa kwizinto ezininzi ezibonakalayo. Ngomnye wamandulo endala ezenziwe ngumntu kwaye ulungiselelwe phantsi komhlaba iminyaka eyiwaka. I-charcoal kwifom yefom isisiseko esiphezulu samandla kuwo wonke umhlaba kwaye ngelishwa, enye yezona zinto ezibangela ukukhungulwa kwamahlathi kwihlabathi.
Ukuveliswa kwamalahle embali
Imveliso yamatye yokhuni ibuyele kwixesha elidlulileyo lomntu xa izicaka zeemithi zokhuni eziphelweni zazo zenziwe zibe yinqaba yepramramidal.
Izivulo zadalwa ngaphantsi komqu kwaye ziqhotyoshelwe kwi-flue central yokujikeleza umoya. Imithi yonke yomthi yayakhiwa emgodini ogqutywe ngumhlaba okanye ehlanganiswe nodongwe ngaphezu komhlaba. Kwaqalwa umlilo womthi kwi-flue base kwaye wancinciza ngokuthe ngcembe kwaye wasasazeka kwaye waphuma.
Iimpawu zamandulo zamatye, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, zivelise malunga neepesenti ezingama-60 zeemithi ngokubanzi , kodwa kuphela ngama-25% ngesisindo, semveliso yamathala. Ngethuba lekhulwini leshumi nesikhombisa, ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe kubudala malunga neepesente ezingama-90 kunye nekhono elithatha iminyaka ukufunda kunye nokutshala imali enkulu kwiikiloni kunye nokubuyisela kwixesha elide.
Ukuveliswa kweMali yamanje
Ngokufana nenkqubo endala, inkqubo yoshishino yamathambo yanamhlanje ichithisa imithi encinane okanye ingekho umoya okhoyo othabatha izinto ezikhethekileyo kodwa ezilula. EUnited States, imithi iyona nto ibalulekileyo ekusetshenziselwa amalahle kwaye ngokuqhelekileyo ithengwe ngolu hlobo lwezinto zokuhlala ezivela kwiismill-slabs kunye ne-edgings.
AmaSwill afuna ukufumana abasebenzisi bezinto ezi zinto ngenxa yengxaki yokusingqongileyo ngokutsha nokutshitshiswa kwemitha. Lapho kukho ama-sawmills , kukho imveliso eluhlaza.
I-United States yeHlathi yeNkonzo iqikelele ukuba kukho iiyunithi ezingama-2,000 ezivelisa amalahle eUnited States, kubandakanywa izitena zezitena, iikhonkethi kunye ne-block castry, kunye neengxowa zetsimbi kunye neengxelo zentsimbi.
Umbuso waseMissouri uvelisa inxalenye ebalulekileyo yale mveliso yesizwe yamathala (kuye kwadlula imimiselo engqongileyo engqongileyo) kwaye iipesenti ezingama-98 zazo zonke iilahle ziveliswa empuma ye-United States.
Nangona i-charcoal ingenziwa kwiphina inani lezinto eziphathekayo, izinto ezinzima ezifana ne- hickory , i- oki , i- maple kunye ne-fruit-woods ziyakuthandwa. Zineengqungquthela ezikhethekileyo kwaye zivame ukuvelisa ibakala elingcono lomlilo. Amabakala angcono amalahle avela kwizinto eziqingqiweyo kunye nomxholo we-sulphur ophantsi.
Ukusetyenziswa kwamathambo kungamangalisa. Ngaphandle kokuba ube ngumbane opheka i-steaks, i-hotdog, kunye ne-hamburgers kwi-picnic yeCawa, amalahle asetyenziswa kwezinye iinkqubo ezininzi. It isetyenziswe kwimithi ethile ye-metallurgical "yokuhlanjululwa" kunye nococa ukususa ama-organic compounds afana ne-klorine, i-petroli, i-pesticides kunye nezinye iichiza ezinobuthi emanzini nasemoyeni.
Ukuqukumbela kwamalahle, enesimo esiphezulu somhlaba, ukhula usetyenziswa njengesihlanjululwa. Isetyenziselwa ukuhlanjululwa nokucoca izitya kunye nakwiimiski zegesi ezazisetyenziswa ngexesha leMfazwe yaseGulf. I-NutraSweet isebenzisa amalahle asebenzayo ukuguqula umkhiqizo wabo ube ngumpu. Ukusebenza kwelahleko kusetyenziswa njenge-antidote yeentlobo ezininzi zeentlongo kwaye zithathwa njenge-anti-flatulent.
I-Lump Charcoal njengeShishini
Uninzi lwabatyekisi bemveliso yamataka bathengisa umkhiqizo wabo njengesikhuphethi. Eli shishini lilawulwa yiinkampani eziliqela ukuba zibandakanye i-Kingsford, i-Royal Oak kunye neemveliso zentengiso ezinkulu. Ezi nkampani zinokwenza okanye zingenakwenza "i-lump" yamathambo engumnye umbane onamathuba athile kwaye unokukwazi ukufumana ishishini elincinane lokuqalisa. Olunye ubuchwephesha olutsha kunye nolonwabo oluthakathaka lufuna imililo kwifom elula.
Umrhwebi onethemba lokusinda kwishishini le-charcoal liza kufuna ukuqala kunye nokuthengisa okuhle kunye nobudlova. Zininzi iinkampani ezincinci ziye zasinda kodwa ezininzi azizange zenze "ezinkulu." Baye bafumanisa ukuba amandla abo kwimakethe ye-charcoal marqueal ngokwenza umthi onzima wendalo unqabileyo.
Iingcamango ezinje ezifana nokuphuhlisa imveliso kwipokethi enesibambiso, esilukileyo xa sivuthayo siya kutshabalalisa ilahle.
Lo mveliso okhawulezayo odibaniswe kunye ne-paraffin ephothiweyo ephothiweyo egcwele i-charcoal yemvelo ibe yimpumelelo emgangathweni kwezinye iimarike zendawo.
Umqobo omkhulu udala iphakheji elikhangayo. Iingxaki zobuchwepheshe kunye nokugcinwa zenza iiphakheji ezingapheliyo kwaye zingathintela ukuthengisa. Unokufumana isikhwama sakho kwishefu elisezantsi emva kwevenkile ngenxa yepakethe elula. Unokuba neengxaki zokufumana abahambisa abajongene nemiqulu emincinci.
Kukho nakwezinye iimveliso. Umthi womthi unomxholo ophantsi we-sulfur, ngokungafani nemveliso yamalahle okanye i-petroleum. Le ngqayi ingasetyenziswa apho ezinye iintlobo zekhabhoni zingenako. Ukuphuhlisa i-charcoal ekhethiweyo eyenziwe ngokusetyenziswa kwefayili yokusetyenziswa kwamashishini afana ne-air kunye namanzi. Le mveliso ephantsi ye-sulfur yamalahle yayiza kuthengiswa kumenzi omkhulu wekhabhoni e-activated njengeCalgon Carbon yasePittsburgh, PA.
Ukuqalisa ishishini loMbane
Ukongeza kwimiba eluhlaza, kuya kufuneka ube nommandla ofanelekileyo wokufudumeza loo nto ngelixa uvumela kuphela inani elincinci lokuhambisa umoya. Le nto ingaba yintsimbi yezitena okanye unokhetha uhlobo lwesakhiwo sezakhiwo esibizwa nge-retort. Unokulindela ukuhlawula kumawaka angamakhulu amawaka eedola enye yazo.
Kwakhona kufuneka uhlakulele ukusebenza kunye nokunyanzelisa. Inkuni ephekwe yincinci ngaphezu kobukhulu bayo bokuqala malunga nesithathu kwisithathu. Kufuneka iphulwe phantsi kwiimveliso zorhwebo. Oku kuya kufuneka kwenziwe ngeteksi ekhethiweyo eyenziwe ngumatshini owenzela umyalelo.
Akukho mqikelelo weendleko ezifanelekileyo apha - kufuneka wenze umsebenzi omlenze omningi.
Emva koko kufuneka ugibele okanye upakishe ikhabhoni. Imishini yokugaya ifumaneka ngokukhawuleza kwiinkampani zokubonelela ngezixhobo. I-charcoal ibeka ingxaki ethile yokubambisa ngenxa yokuhlukana okukhulu ngobukhulu beli qhekeza. Ezi ngxaki azinakwenzeka ukulungisa kwaye umgca wokugqithisa ungakuhlawula imali engama-$ 100. Unokufumana imali ephantsi.
Isicwangciso esihle kakhulu sokwenza impumelelo yezoshishino kwi-"lump" amalahle kukugcina i-market kwindawo okanye kwingingqi. Unokudibanisa ne-grill okanye inkampani yangaphandle ye-oven kwaye udibanise imizamo yakho yokuthengisa. Memeze loo mveliso njengomgangatho ophezulu, utywala lwemvelo onobuncwane kwi-briquettes. Abantu abaninzi abaqapheli ukuba iilahle ziyafumaneka kule fomu yonke yemvelo.
Iingenelo zeLump Charcoal
I-flames yamalanga yinto yonke yemvelo, i-100 pesenti yemveliso eluhlaza ngaphandle kwezithako.
I-charcoal yemvelo iyatshisa ngokukhawuleza kunokuba i-briquettes, ngoko ke ukutya kunokupheka phezu kwemibhobho yemvelo ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kwe-7 emva kokukhanyisa.
Umsi womlilo ungabhalwa ngaphandle kombane kunye nomdlalo nje kunye nephephandaba - oku kuthetha ukuba akukho-flavour off.
Elinye iipilisi lamatye enqabileyo enqabileyo livelisa ukushisa okulinganayo kwamakhilogremu amabini e-charcoal.
Iintsilelo zeLump Charcoal
Nangona ilahle yesikhala ikhula ekuthandeni, ukufunwa kwabathengi kusekho emva kwe-charcoal briquettes.
Nangona ilahle yomlambo ngumvelisi oshisa kakhulu, ixabiso layo langoku liphindwe kabini kwi-briquettes.
Iphunga lelahle lilukhuni, linemilo engaqhelekanga, kwaye luchoboza ngokulula. Ijwayele ukuba ibe ngothuli kunye neentlaka.
ICentral South South - Ukutyelelwa kwe-Photo of Common Park Trees
Ukuthengwa nokugcina iSiinsaw: Izinto omele uzi
Ukunyangwa kweKhaya kweNtshukumo yeNtshukumo
10 I-Tripp edibeneyo kunye neTyler Sketches
Ngaba Kufuneka kubekho iMali Yesiqhelo Eyonke E-US?